Maxay tahay beentii uu Maxi Rodriguez u sheegay Rafa Benitez si uu Liverpool ugu soo biiro? – Gool FM
(Liverpool) 01 Abril 2020. Ciyaaryahankii hore ee Liverpool, Maxi Rodriguez ayaa Rafa Benitez ka qalqaalsaday inuu ku soo biiro kooxda Reds oo uu markaas majaraha u qabtay, waxaana uu qiray inuu been u sheegay si uu kaga mid noqdo kooxda Ingiriiska ka dhisan.
Ciyaaryahankii hore ee Argentina ayaa Liverpool kaga soo biiray kooxda Atletico Madrid, waxaana uu sheegay Benitez inuu ku hadli yaqaanno luuqadda Ingiriiska sidaas darteedna aysan dhib ku ahayn inuu la fal galo ciyaartoyda kooxda.
“Rafa waxa uu ii sheegay inay muhiim tahay in qof walba uu Ingiriis ku hadli karo,” ayuu ku sheegay muuqaal toos ah oo uu ka soo galay bartiisa Instagram-ka.
“Markii uu i weydiiyay inaan ku hadli karo, waxaan ku jawaabay ‘haa dabcan, haka welweli’.
“Ma aanan rabin aniga in heshiiska uu burburo, sidaas darteed waxaan sheegay xoogaa been ah” ayuu hadalkiisa ku daray Maxi.
Waxa uu intaas kusii daray in marka uu heshiiska dhammeystirmay sidoo kalena la soo fariistay shirka jaraa’id in Macallin Benitez u sheegay inuu saxaafadda la hadlo.
Balse Maxi Rodriguez ayaa ku wargeliyay macallinkiisii in kaliya luuqadda Ingiriiska uu ka yaqaanno ereyga “Hello” taasoo ka careysiisay Rafa.
Si kastaba ha ahaatee, xiddiggii hore ee Reds waxa uu sheegay in Benitez uu arrinta ka dhigtay madaddaalo sidaas darteedna ay labadooduba xaaladda qosol kula jaan qaadeen, inkastoo markii hore macallinka reer Spain uu carooday.